Vahaolana fluoride elektronika
Description:Ho an'ny Data Center,Firafitra ho an'ny Data Center Server,Fanolorana dielectric
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kofehy ho an&#39;ny Data Center Server > Fanimbana Dielectric ho an&#39;ny Data Center Server
Anarana simika: Perfluorohexen e
Ny rivotra amin'ny hafanam-po dia miady amin'ny fihazonana ny hafanana mba hihazonana ny vokatra faran'izay betsaka. Ny fihenanam-pitenenana dia miteraka fahantrana lehibe kokoa sy ambany kokoa ny vokatra.
Ny ranondran-drano dia mamela ny fanamafisana ny CPUs, GPUs ary ny fitadidiana avoakany avoakany, nefa tsy mampihena ny haavony. Manatsara ny fahamendrehana ihany koa ny fanamafisana ny rano
dia mamela ny fanaraha-maso ny takelaka ho an'ny serivisy sy kodiarana kW ambony.
manana dielectric avo. I T C ooling ny hafanana-niteraka ny Data Center Server.
* Ideal Fluoride Solution idealy manana fluorine mangatsiaro tsy fahazoana matematika ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoana samihafa mifehy hafanana hafahafa;
* Fluorocarbon Cooling Medium dia Tsy manana enti-mampidi-doza, tsy mivoatra ary tsy misy fipoahana, tsy misy afo sy ny teboka Fluorocarbon Refrigerant;
* Kilaometatra ho an'ny Data Center Server tsara fantson-jiro elektrika Fluorocarbon, fiakarana avo lozam-pifamoivoizana mihoatra 40KV;
* Fluorine Kahidratsy ny dielectric dia tsy miovaova etsy ambany ny 2 dia tsy mametraka ny angona very amin'ny fampiharana foibe data;
* Ny solvents mpanadio fluorinated dia Tsara ny fahalefahana, io vaksiny io raha oharina amin'ny rano maloto; Afaka mikoriana tsara ary manaparitaka hafanana amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fakan-tsary;
* Fluorocarbon Cooling Medium dia Tsy misy poizina, tsy mampidi-doza, tsy mampatahotra;
* Fluorine Frfrigerant friendly environment, manana ODP sanda 0 sy ambany ambany GWP ambany
Fangatahana tsiranoka na mangatsiaka heatsink Contact Now
Fihenan-tsolika tsy misy rano Contact Now
Alefaso mangatsiaka kokoa noho ny mpankafy Contact Now
Rano mangatsiaka mifono vy amin'ny Fan CPU Contact Now
rano mangatsiaka vs Fangatsiahana ny rano Contact Now
rano mangatsiaka hp z800 z420 Fangatsiahana Contact Now
z420 w / mpankafy sps-tsiranoka mangatsiaka Contact Now
Rano mangatsiaka mamelombelona ny solosainao Contact Now
Ho an'ny Data Center Firafitra ho an'ny Data Center Server Fanolorana dielectric
Copyright © 2021 Guangdong Giant Fluorine Energy Saving Technology Co.,Ltd Zo rehetra voatokana.